Fitsaram-bahoaka nahafaty polisy telo lahy: olona 20 izao no efa voasambotra | NewsMada
Na eo aza ny raharaha momba ny kidnapping, mahazo vahana any Toamasina, mandeha ny famotorana sy fanadihadiana ataon’ny zandary mikasika ilay raharaha fitsaram-bahoaka, nahafaty ireo inspektera polisy telo lahy, tany Fenoarivo Atsinanana, farany teo. Fantatra fa olona 20 izao no efa voasambotry ny zandary.
Mitohy hatrany ny fanadihadiana manodidina ny famonoana polisy tany Fenoarivo Atsinanana, ny volana oktobra teo, na somary nangingina aza. Miisa 20 indray ny olona nosamborin’ny zandary tao Ambodiazinina Fenerivo Atsinanana, ny fiandohan’ny herinandro teo, voalaza fa isan’ny mpandray anjara sy mpampirisika tamin’ny fahafatesan’ireo polisy inspektera telo lahy nambara namita iraka ara-dalàna. Saika hanao fanadihadiana momba ny resaka halatra lavanila tao an-toeran izy ireo, ary anisan’ny tafiditra amin’ireo olona voasambotra ireo ilay raim-pianakaviana nanaovana fisavana izay niantso vahoaka ka niteraka iny vonoan’olona mahatsiravina nahafaty polisy telo lahy iny.
Raha tsiahivina hatrany, nanao fisavana ny trano fonenan’ilay rangahy mpandraharaha lavanila io ny polisy telo lahy. Nivadika anefa ny resaka ka lasa ireto mpitandro filaminana indray no voatondro ho olon-datsy, niantsoana fokonolona. Raikitra teo ny fitsaram-bahoaka ka niharan’ny famonoana feno habibiana izy telo lahy. Nandray ny andraikiny ny mpitandro filaminana taorian’izay, niasa mangina. Misahana ny fakana am-bavany sy ny famotorana ny zandary misahana ny fikarohana sy heloka bevava izay iarahany amin’ny polisy.
Hiteny ny mpampanoa lalana
Amin’ny zoma 7 desambra ho avy izao amin’ny 10 ora antoandro ao amin’ny lapan’ny Fitsarana ambony Toamasina, fantatra fa hanao valandresaka ho an’ny mpanao gazety ny tonia mpampanoa lalana anivon’ny fitsarana ambaratonga voalohany, Atoa Rajaonah Thierry. Vinavinaina fa hifantoka amin’ny raharaha tsy fandriampahalemana niseho tamin’ny endriny maro niseho tany Toamasina sy ny manodidina azy izany. Anisan’izany ny raharaha
fakana an-keriny an’i Armane Kamis farany teo, nahavoatonontonona mpitandro filaminana roa lahy. Anisany koa ny “Raharaha Ambodiazinina”, nahfatesana polisy inspekitera telo lahy ary ny raharahan’ny fandosirana na fampandosirana ny fonjan’Ambalatavohangy an-dRajaonarison Roby Alphonse. Ity farany izay misy rohim-pihavanana amina mpitsara iray sy manamboninahitra amina polisy iray ihany koa.
Na izany aza, mitohy hatrany ny fanadihadiana sy fikarohana ireo heverina ho mpiray tendro rehetra mikasika ny fakana an-keriny ilay teratany karana, i Arman Kamis, ka anisan’izany ny
nahavoasambotra lehilahy iray tany Antananarivo farany teo. Ity farany izay heverina ho lehiben’ireo jiolahy mpaka an-keriny sy tompon’ilay fiara tsy mataho-dalana nampiasaina nitondrana ilay teratany karana, sy ingahy “Black”, tompon’ilay trano nanafenana sy nanagiazana an’i Arman Kamis. Ny loharanom-baovao hatrany no nahalalana fa ity trano ity
avokoa ny nihazonana an-keriny ireo rehetra nalaina an-keriny tany Toamasina tao anatin’ny efatra taona, mialoha ny hamindrana azy amin’ny trano sy fokontany hafa. Mbola misy vehivay roa mpisaron-tava manatitra sakafo an’ity teratany karana ity karohina fatratra.